China QF-JX-300 China ICU Medical Separate Bridge Pendant yevagadziri vechipatara nevatengesi | Wanyu
Chiremba Bridge Pendant
Iri rekurapa bhiriji pendendi inogona kuve yakagadzirirwa kuita maviri modes, yakaoma chikamu uye yakanyorova chikamu chakabatanidzwa pamwechete kana kupatsanurwa.
Chikamu chakanyorova chakashongedzerwa neanoverengeka-dura rechiridzwa chikuva. Iyo yakagadzirirwa ne syringe pombi rack uye yekumupomba pombi tsvimbo. Chikamu chakaomeswa chakashongedzerwa neyakajairika-chiridzwa chikuva chikuva uye mudhirowa kukwirira kuri kuchinjika.
Iyo gasi yekurapa, kukweva, magetsi uye netanho yekuburitsa zviteshi zvakagadziriswa muzvikamu zvakaoma uye zvakanyorova mukati mevashandi vekurapa.
1. Kunyatsotarisira Kamuri
2. MaWadhi Ose
1. Yakakwirira-simba Simba
Bhiriji rakagadzirwa ne-high-simba aluminium alloy zvinhu. Iine simba rakakura rinotakura.
2. Sliding Rail Dhizaini
Iyo yekutsvedza njanji dhizaini inoita kuti shongwe ifambire zvakanyanya, uye zvakare inoita kuti vashandi vekurapa vawedzere kusevha-kwevashandi.
3. Soft akatungamirira Mheni
Mwenje yemwenje ye LED yakarongedzwa pamatanda ebhiriji rekurapa pendendi kuti ipe nharaunda yakanaka yekushanda kune vashandi vekurapa.
4. Modular chimiro
Modular dhizaini dhizaini inogona kusangana nezveramangwana kusimudzira zvido uye nyore kugadziriswa.
5. Gasi-magetsi Kuparadzanisa Dhizaini
Iyo gasi-magetsi yekuparadzanisa dhizaini inovimbisa kushandiswa kwakachengeteka.
Tambo yemagetsi uye pombi yekupa mweya haizokanganiswa kana kudonha netsaona nekuda kwekutenderera kwependant.
6. Zvigaro zveGesi zvinogara kwenguva refu
Ruvara rwakasiyana uye chimiro cheiyo gasi interface yekudzivirira isiriyo kubatana. Kuiswa chisimbiso chechipiri, matatu anoti (on, off, and unplug), kanopfuura zviuru makumi maviri zvekushandisa. Inogona kuchengetwa isina mweya kure.
Kureba kwebhiriji: 2200-3200mm
Yakareba kureba kwenzvimbo yakaoma: 550mm
Yakareba kureba kwenzvimbo nyoro: 550mm
Kutenderera kona kwenzvimbo yakaoma: 350 °
Kutenderera kukona kwenzvimbo nyoro: 350 °
Kubereka Kugona kwebhiriji: 600kgs
Kubereka Kugona kwenzvimbo yakaoma: 280kgs
Kubereka Kugona kwenzvimbo nyoro: 280kgs
Mhepo Yemagetsi Outlet
Pashure: LEDD700 Ceiling Type LED Imwe Ruoko Rwekushandisa Chiedza neVhidhiyo Kamera
Zvadaro: TS-DQ-100 Kaviri Ruoko Magetsi Mushonga Endoscopic Pendant kubva kuFekitori
TD-TS-100 Fekitori Yakajeka Inopa Chiremba Combi ...
ZD-100 ICU Inoshandiswa Medical Column Pendant yeHos ...